Jewel Road dia lalao manokana 3 misy ny mampiavaka azy | Androidsis
Jewel Road dia piozila lalao 3 miaraka amina fomba fijery mahafinaritra
Lalao Crescent Moon dia a fianarana amin'ny inona andao haka fitiavana ho an'ny tsirairay amin'ireo horonan-tsary nalefanao tao amin'ny Google Play Store. Vao haingana nitondra antsika baomba Hammer, mpangalatra trano-maizina ao amin'ny olona voalohany nahavita be ary mitazona antsika ny fihenjanana rehetra hamakivaky ireo karazana tranomaizina izay ahitantsika ireo karazana biby goavambe rehetra. Manana lalao maro toy ny Operation Dracula ary maro hafa izay matetika mandalo an'ireto andalana ireto.
Ny alakamisy lasa teo dia natombony ny Jewel Road, ny lalao video piozila vaovao lalao 3 izay aingam-panahy avy amin'ity karazana lalao ity toy ny Candy Crash Saga izay tsy maintsy ampifanarahintsika amin'ny laharana mitovy amin'ireo singa ireo raha te hahazo isa. Amin'ity tranga ity dia mandeha any amin'ny Moyen Orient isika mba hanampy ny bard hizaha ireo tany tsy fantatra ireo. Ny zavakanto hita maso dia miorina amin'ny pixel ary misy fikitika sary lehibe rehefa omena. Ny lalao video dia nataon'i Loony Rocket Studio ary eo ambanin'ny elo an'ny Crescent Moon Games. Raha mitady lalao milamina sy mahafinaritra amin'ny tonony medieval kokoa ianao, Jewel Road dia safidy tsara hafa.
1 Lalao video tsara tarehy misy pixel maro
2 Haavo maromaro hilalao
Lalao video tsara tarehy misy pixel maro
Ireto karazana lalao 3 lalao ireto dia malaza indrindra amin'ny fitaovana ary manana ilay azon'i Activision Blizzard izahay ho ilay manjaka amin'izao fotoana izao. Amin'ny Jewel Road mandray ny andraikitry ny bard ianao Ary ny tanjon'ny lalao dia ny mitazona anao handroso hatrany mba hahafahanao mijery ireo tontolo rehetra miandry anao ireo.
Tsy maintsy mamorona andalana misy sanganasa telo mitovy farafahakeliny. Raha mifanitsy amin'ny karazan-tany misy ny bard mijoro ireo, dia handroso izany. Ny endrik'ireo laharana ireo dia diagonaly izay manavaka azy kely amin'ny lalao hafa toa ny Candy Crush Saga.
Visual arts as pixelated manome kalitao lehibe ary mamela ny fahatsapana mahafinaritra. Io no mahasarika antsika amin'ny voalohany amin'ireo fanovana, na dia azo omena tsiny aza fa afaka miverimberina ny mozika.
Haavo maromaro hilalao
Amin'ity karazana lalao video ity dia zava-dehibe ny fisian'ny ambaratonga maro hamita. Mila azy ireo ianao mampitombo ny laza sy ny haren'ny bard mba hahafahany manohy mamakivaky tany samihafa. Ny faritra tsirairay dia misy ambaratonga 6 izay tokony hamarananao azy vao hifindra amin'ny faritra manaraka ianao.
Miaraka amin'ity lalao manokana ity izay tokony handrosoantsika ilay bard sy ireo singa mihetsika tsara tsy misy karazana lag na tsy fahombiazan'ny fampisehoana, Jewel Road dia mahatonga antsika hilalao lalao tena mahafinaritra. Ankoatry ny fanolorana ireo sombin-javatra hanetsehana ny bard, rehefa mamorona tsipika maromaro ianao, dia ho lasa vatosoa ireo. Raha ampifanarahinao ireo firavaka ireo dia hahazo mana kokoa ianao ka ho mora aminao ny manohy mandehandeha eny amin'ny bard.
Azonao ilay izy maimaim-poana avy amin'ny Play Store miaraka amin'ny doka anaty lalao. Ny lalao 3 mahaliana amin'ny antsipiriany manan-danja amin'ny lalao toy ny fomba fampandehanana ilay mpilalao, ka ny fitadiavana ny tsiroaroa dia ho sarotra kokoa mba hahafahantsika miroso amin'ny dingana manaraka. Ampirisihina mafy.
Làlana firavaka amborao amin'ny fomba rehetra io ary izay mety tsy dia ahitana karazany firy dia ao anaty feonkira. Raha maka fotoana kely ianao hahazoana ny haavony, dia mety hamerimberina io sodina io. Ho an'ny ambiny, manana ny endriny rehetra izy io mba ho lasa iray amin'ireo lalao manokana 3 amin'ny fotoana. Efa an-andro tao amin'ny Play Store izy ka miandry anao ny hijerena ny mikasika manokana ny pixelated, ny fahombiazana lehibe amin'ny setany iray manontolo ary ny fampisehoana fahaiza-manao teknika voalaza, indrindra amin'ny fihetsika sy fivezivezena.
Ny fomba fijerinao sary
Mekanika hafa amin'ny lalao 3 hafa
Miverimberina ny mozika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Jewel Road dia piozila lalao 3 miaraka amina fomba fijery mahafinaritra
Mandehana midina amin'ilay havoana amin'ity arcade space antsoina hoe Mars Mountain ity
Ny fitsambikinana tsy mampino sy ny hafainganam-pandehan'ilay mpihazakazaka Chameleon Run